नयाँ वर्षमा अनमोल र प्रदीपको 'भिडन्त' ?
प्रकाशित : सोमबार, असार ३०, २०७६१५:३८
फिल्म । नेपाली फिल्मको तगडा भिडन्त प्राय विदामा हुने गर्छ । आउँदो दसैँलाई लक्षित गर्दै दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला समुहको फिल्म ‘छमाया छपक्कै’ र अशोक शर्मा निर्देशित तथा निर्मित फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ प्रदर्शनमा आउंदैछ । यो भिडन्तलाई ठुलो भिडन्तको रुपमा हेरिएको छ । यसपछिको ठुलो भिडन्त आउँदो चैत्र २८ गते हुने सम्भावना छ । गत वर्षको चैत्रमा अनमोल केसी र सलिन मान बनिया आमने सामने भएका थिए । यसपटक भने अनमोल र प्रदीप खड्काको भिडन्त हुन् सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
भुवन केसी यतिबेला होम प्रोडक्सनको फिल्ममा काम गर्दैछन् र यसको छायाँकन दसैँ आसपासमा हुनेछ । फिल्मको वितरण अधिकारी मोफसलका लागि एफडी कम्पनिले खरिद गरेको छ भने आइतवार सम्झौता समेत भइसकेको छ । भूवनले आफ्नो ब्यानर दि सुपर काजोल फिल्मस्बाट फिल्मलाई निर्माण तथा निर्देशन गर्दैछन् । उक्त फिल्मको लागि उनले एफडी कम्पनीसँग कमिसनमा काम गरेको वुझिएको छ भने , उनलाई मिनिमम ग्यारेन्टी सहित ८० लाख भन्दा बढी एडभान्स दिएको छ ।
एडभान्स दिएर कमिसनमा भूवन र एफडीविच काम गर्ने सहमती भएको पनि बुझिएको छ । भुवनसँगै अनमोल केसीको समेत अभिनय रहने फिल्मलाई वितरण कम्पनिले बलियो डेटमा प्रदर्शन गर्ने सोचमा छन् । दसैँपछिको बलियो डेट नयाँ वर्षलाइ मानिन्छ । यसैले गर्दा पनि अनमोलको अन टाइटल प्रोजेक्टसँग प्रदीपको ‘प्रेम गीत ३’ सँगै प्रदर्शनमा आउने सम्भावना बढ्दो छ । लगानी र स्टार कास्टको हिसाबले भुवनले चैत्र अन्तिमकै डेटलाई तय गरेको बुझिएको छ । किनकी गत वर्ष सोहि समयमा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ ले अनमोलको करियरकै सर्वाधिक व्यापार गरेको थियो ।
सन्तोष सेन र छेतेन गुरुङको निर्देशनमा तयार हुने फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ सँग भुवन निर्देशित फिल्मसँगै प्रदर्शनमा आउदा थोरधेर घाटा भने दुवैलाई लाग्नेमा दुइमत छैन । साथै सो समयमा हलिउड फिल्म ‘बोण्ड २५’ पनि प्रदर्शनमा आउंदैछ । ड्यानियल क्रेग अभिनित जेम्स बोण्डको २५ औ सिरिजलाई अप्रिल ८ रिलिज डेट राखिएको छ । साथै यसै समयमा अप्रिल १० मा भारतीय क्रिकेटर कपिल देवको बायोपीक फिल्म ‘८३’ पनि प्रदर्शनमा आउंदैछ । रणवीर सिंहले कपिल देवको भूमिका निर्वाह गरिरहेको फिल्मलाई फस्ट लुकले नै प्रतिक्षित बनाएको छ ।
यी सबसँगै यदि ‘प्रेम गीत ३’ वितरणको जिम्मा एफडी कम्पनिले पाए भिडन्त टर्ने सम्भावना बढ्ने छ , अन्यथा यस वर्ष अनमोल र प्रदीपको ‘टकराव’ ले बक्स अफिसको अंक गणित प्रस्ट्याउनेछ ।
‘जानी नजानी’ फस्टलुकसँगै रिलिज घोषणा
अनमोल बिनानै ‘ब्याचलर बन्टी’ ?
साम्राज्ञी र अंकितको ‘रातो टिका निधारमा’
फूलपातीमा ‘काले दाई’
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ मा २२ हजारको अडिसन
अब जापानमा ‘छ माया छपक्कै’
लियोको नयाँ प्रेमिका क्यामिला
फेरियो राजकुमारको फिल्मको नाम
‘डबल सी’ प्रवर्धन गर्दै दया र वर्षा
तस्वीरमा ‘सम्झना बिर्सना’ कि छुल्ठिम
मित्रताको कथामा ‘सँग सँगै’
दर्शकले रुचाए भिटेनको ‘थाहा छैन’ (भिडियो)
विपिन किङ्ग बनेपछि (भिडियो)